Fikir iyo Falanqeyn
Fidel Castro (Bidix) iyo Erich Honecker
Goobtu waa Barliin-Bari. Waa maalin Axad ah. Abriil waa 3 1977. Waa Guriga Golaha Dhexe. Shir socday shan saacadood oo dhowdhow ayaa dhex maray Hoggaamiyaha Cuba, Fidel Castro oo markaa ka soo laabtay Geeska Afrika iyo Hoggaamiyaha Jarnalka Bari Erich Honecker. Marka lagu daro biririf dhexda ah, shirku wuxuu socday barqadii ilaa makhribkii. Wuxuu kulanku billowday barqadii 11:00 saac.